စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာ - ဝီကီပီးဒီးယား
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာ (Business Intelligence သို့ BI) သည် စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက်များကို အချက်အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အသုံးပြုသော နည်းဗျူဟာများနှင့် နည်းပညာများ ပါဝင်သည်။  BI နည်းပညာသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၏သမိုင်းကြောင်း ဆိုင်ရာ၊ မျက်မှောက်ဆိုင်ရာနှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အမြင်များကို ပေးသည်။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာ၏ နည်းပညာများတွင် အစီအရင်ခံခြင်း၊ အွန်လိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ၊ ဒေတာတူးဖော်ခြင်း၊ဖြစ်စဉ်တူးဖော်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသော ဖြစ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စံတစ်ခုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ စာသားများကို တူးဖော်ခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နှင့် ပြဋ္ဌာန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာ ၏ နည်းပညာများသည် မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း အသစ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ မြှင့်တင်ရန် နှင့် ဖန်တီးရန်အတွက် အတွက် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော အချက်အလက်များ နှင့် တစ်ခါတရံ ဖွဲ့စည်းမထားသော အချက်အလက်များ အမြောက်အများကို ကိုင်တွယ်အသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာမအချက်အလက် များကို လွယ်ကူစွာ အနက်ဖွင့်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုးထွင်းကြည့်ရှုမှု အပေါ် အခြေခံ၍ အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် သက်ရောက်မှုကောင်းသော မဟာဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဈေးကွက်အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အလမ်းကောင်း နှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေနိုင်သည်။ 
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနေနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မှစ၍ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက် အထိ ကျယ်ပြန်စွာ ပါဝင်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်သည်။ မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အဆင့်အားလုံးအတွက် အရေးကြီးမှု၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဘီအိုင်သည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော ဈေးကွက်မှ ဆင့်ပွားရရှိသော အချက်အလက်များ (ပြင်ပ အချက်အလက်များ) နှင့် ကုမ္ပဏီတွင်းမှ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (အတွင်း အချက်အလက်များ) ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်လျှင် ပို၍ ထိရောက်သည်။ ထိုသို့ ပေါင်းစပ်လိုက်သော အခါတွင် ပြင်ပအချက်အလက်များ နှင့် အတွင်းအချက်အလက်များတို့သည် ပြည့်စုံသော မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ထိုသို့သော ဉာဏ်ပညာမှာ သတင်းအချက်အလက် တစ်စုတည်းဖြင့် မမြင်တွေ့ရနိုင်သော မြင်ကွင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသော အသုံးပြုမှုများတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ပညာများကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းအား ဈေးကွက်အသစ်အတွက် နက်နဲစွာ သိမြင်နိုင်ခြင်း၊ ဝယ်လိုအားကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း နှင့် ကွဲပြားသော ဈေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ သင့်တော်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း တို့အပြင် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများကိုလည်း တိုင်းတာနိုင်သည်။
BI အသုံးချပရိုဂရမ်များသည်ဒေ တာသိုလှောင်ရာ (DW) မှသို့မဟုတ် ဒေတာမာ့ မှကောက်ယူသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည်။ BI နှင့် DW ၏သဘောတရားများကို "BI / DW"  သို့မဟုတ် "BIDW" အဖြစ်ပေါင်းစပ်သည်။ ဒေတာသိုလှောင်ရုံတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အပံ့ ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များမိတ္တူတစ်ခုပါရှိသည်။
↑ Dedić N. & Stanier C. (2016)။ "Measuring the Success of Changes to Existing Business Intelligence Solutions to Improve Business Intelligence Reporting"။ Measuring the Success of Changes to Existing Business Intelligence Solutions to Improve Business Intelligence Reporting. Lecture Notes in Business Information Processing။ Lecture Notes in Business Information Processing။ 268။ Springer International Publishing။ pp. 225–236။ doi:10.1007/978-3-319-49944-4_17။ ISBN 978-3-319-49943-7။
↑ ( Rud (2009)။ Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your Business in the Global Economy။ Wiley & Sons။ ISBN 978-0-470-39240-9။ )
↑ Pulse: Understanding the Vital Signs of Your Business။ Ambient Light Publishing။ 2014။ pp. 41–42။ ISBN 978-0-9893086-0-1။
↑ Amazon Web Services For Dummies။ For dummies။ John Wiley & Sons။ 2013။ p. 234။ ISBN 9781118652268။ 2014-07-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [...] traditional business intelligence or data warehousing tools (the terms are used so interchangeably that they're often referred to as BI/DW) are extremely expensive [...]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီးပွားရေးဆိုင်ရာ_ဉာဏ်ပညာ&oldid=527743" မှ ရယူရန်